Romelu Lukaku: Waalidkey ma cunni jirin casho ilaa aniga iyo walaakey aan ka cunno… – Hagaag.com
Romelu Lukaku: Waalidkey ma cunni jirin casho ilaa aniga iyo walaakey aan ka cunno…
Posted on 16 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Waxaa jiray dhibaatooyin, dhibaatooyin iyo rafaad fara badan oo uu la soo kulmay xiddiga reer Belguim, Romelu Lukaku, oo ah gooldhaliyaha ugu sareeya kooxda Inter Milan yaraantiisa, maadaama aabihiis u huray naftiisa isaga iyo walaalkiis.
Xiddiga reer Belguim ayaa 3 gool u dhaliyay kooxda “Nerazzurri” 3-dii kulan ee xilli ciyaareedkan la ciyaaray Ka hor, waxa uu u dhaliyay kooxda Inter 34 gool tartamada xilli ciyaareedkii hore, waxana uu si wax ku ool ah uga qayb qaatay ku hogaaminta kooxda Horyaalka Talyaaniga iyo ciyaartii ugu dambaysay ee Horyaalada Yurub, halkaasoo loogu doortay xiddigii ugu fiicnaa tartanka.
“Aabbahay wuxuu joojiyay inuu ciyaaro kubbadda cagta markii aan lix sano jiray, maadaama hooyaday uu ku dhacay cudurka macaanka,” ayuu Lukaku ku yiri – hadallo uu siiyay wargeyka Talyaaniga ee Gazzetta dello Sport, “. Waxaan soo marnay sannado aad u adag .. Hooyaday ma haysan wax lacag ah, sidaa darteed … Waxay ka shaqeyn jirtay maqaayadaha, aniga iyo walaalkayna waxaan u raaci jirnay maqaayada ciyaaraha kadib.
Waalidkey ma cuni jirin casho ilaa aniga iyo walaalkay aan ka cunno. sidaasi ayuu raaciyey
Xiddiga reer Belguim – oo 43 gool u dhaliyay kooxda “Red Devils” 44 kulan – wuxuu ku soo gabagabeeyay “wax kasta oo aan gaaro waxaan ku leeyahay hooyaday, hadaf ama gool kasta oo aan dhaliyana waxaan u hibeeyey iyada aniga oo aan sawirayo xarafka (A), kaas oo matalaya xarafka ugu horreeya ee magaca hooyaday (Adolphine) “.
Waxaa xusid mudan in Lukaku (27 sano jir) uu xirfadiisa kubada cagta ka bilaabay kooxda Anderlecht, ka dibna wuxuu saxiixay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed kooxda reer Belgium bishii May 2009 markii uu gaadhay 16 sano jir, sanadkii 2009 wuxuu u dhaqaaqay Chelsea ka hor inta aan amaah lagu siinin wax ka badan hal koox, ka dib wuxuu qandaraas la galay Everton 2014. Kadib Manchester United ayuu ku biiray sanadkii 2017, ka hor inta uusan ka tagin Premier League kuna biirin Horyaalka Talyaaniga oo uu la saxiixday Inter 2019.